I-11x30 Podcast: Ukulinda kuphelelwe yithemba | Ngivela kwa-mac
I-Podcast 11 × 30: Ukuphelelwa ithemba okulindile
Izindaba ezihlobene nesikhathi samanje se-Apple kuleli sonto eledlule, zisuselwe futhi kumahemuhemu, ngoba ukwethulwa okulindelekile kwe-iPhone 9 (manje okuzobizwa nge-iPhone SE) akwenzekanga. Abezindaba baseMelika thina yafakwa maphakathi no-Ephreli njengosuku olungakhishwa olusha lokukhishwa.
Ngokuphathelene ne-iPad Pro 2020 entsha, i ilahlekile i-chip ye-U1, i-chip ezosivumela ukuthi sibeke idivayisi ngaphandle kokukhululeka okukhulu. Le chip etholakala ku-iPhone 11, ekugcineni iqinisekisiwe ukuthi ayikho kwi-iPad Pro 2020, ngakho-ke futhi amahemuhemu ahlobene ne-iPad Pro entsha yalo nyaka athatha isisindo.
Ngenxa yokushoda kwezindaba ezihlobene ne-Apple, siphawule ngokuhamba kwezinkampani eziningi kwethulwa ama-mobiles e-euro ayi-1000, njengoba kunjalo ngeXiaomi Mi 10 nenkinga uHuawei abhekene nayo ngamatheminali entengo efanayo kodwa ngaphandle kokukwazi ukunikeza izinsizakalo zeGoogle.
I-Actualidad iPhone podcast ingalandelwa bukhoma ngesiteshi sethu se-YouTube futhi ibambe iqhaza kuyo ngokuxoxa nethimba lePodcast nabanye ababukeli. Bhalisela isiteshi sethu kusuka ku-YouTube, kuya ku- thola izaziso lapho ukuqoshwa bukhoma kwe-podcast kuqala, kanye nalapho sifaka amanye amavidiyo esiwashicilela kuwo.
Iyatholakala naku-iTunes ukuze ukwazi lalela noma kunini lapho ufuna ukusebenzisa uhlelo lwakho lokusebenza oluthandayo lwePodcast. Sincoma ukuthi ubhalisele i-iTunes ukuze iziqephu zizolanda ngokuzenzekelayo uma sezitholakala.
Okwezinyanga ezimbalwa, i-podcast eqoshwe yi-Actualidad iPhone neqembu likaSoy de Mac iyatholakala ku-Spotify, ngakho-ke uma usebenzisa lokhu ipulatifomu yokusakaza umculo ukulalela umculo wakho owuthandayo. Futhi uma kungenjalo, une- inketho yokusilalela ku-iVoox.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Podcast 11 × 30: Ukuphelelwa ithemba okulindile
Ama-Simulators we-Mac ne-iPad odokotela bezitimela abalwa ne-COVID-19
Imidlalo emithathu yamahhala ye-Apple Watch yakho